WONDERFUL UNIVERSE: May 2012
လေနှင်လို့ တိမ်မျှင်တွေ လွင့်ပြယ်တဲ့အခါ
မြင်ခွင့်ရမှာပါ ။ ။
9.10.1997 Posted by
လေပြည်တွေက ရူးရူးသုတ်သုတ်နဲ့ ကန်ဘောင်လျှောက်လမ်းမှာ ပြေးလွှားလို့ နေကြသည်။ အိမ်က ထွက်လာစမှာ အိုက်လို့ ဖြုတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို လည်ပင်း ပိတ်လုံသည်ထိ ဆွဲစိပစ်လိုက်ရသေးသည်။ ညကြီးသန်းခေါင်မှာမှ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ ကားတွေ များလိုက်တာ။ တဝေါဝေါနှင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ကားများက ညသန်းခေါင်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ တစ်ယောက်ထဲ လမ်းလျှောက်နေသော ကျွန်တော့်ကို အရူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နေကြလေမလား..။ အဝေးပြေးကားလမ်းမကြီး နံဘေးမှာ ဖြတ်စီးနေသော မြစ်ပြင်ကို ငေးကြည့်ရင်းက ကျွန်တော့် မြင်ကွင်းတွေထဲ အ၀ါရောင်တွေ သိပ်များနေတာ သတိထားမိလာသည်။ ညောင်းညာလာသော ခြေလှမ်းတို့ကို ရပ်တန့် အနားပေးဖို့ လိုအပ်လာတော့ ကျွန်တော်က လူနေအိမ်တွေနှင့် ဝေးဝေးမှာ ရောက်နေခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော် နင်းလျှောက်နေသော မြက်ခင်းပေါ်ပဲ ထိုင်ချ အနားယူရမလား စဉ်းစားရင်း တဝေါဝေါ ဖြတ်သန်းသွားနေသော ကားများက ကျွန်တော့် မြင်ကွင်းကို နင်းဖြတ်နေသလို ခံစားနေရသောကြောင့် မြစ်ကမ်းနံဘေးကို ဆင်းကာ ထိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
တကယ်တမ်းတော့ ခု ကျွန်တော် ရပ်တန့်နေရာ မြက်ခင်းပြင်နှင့် သစ်ပင်တန်းတွေဘေးမှာ မြစ်ကမ်းဘေးကို ဆင်းမရအောင် ကာထားသော ခါးလောက် မြင့်သည့် သံတိုင်တွေ ရှိသည်။
ဟိုတစ်ဘက်ကို ဖြတ်ကျော်လျှင် ဒဏ်ရိုက်ခံရမည်လား မစဉ်းစားမိလောက်အောင်ပင် မြစ်ပြင်က ကျွန်တော့်အား ညှို့ငင်လို့ သွားခဲ့ပါသည်။ သံတိုင်တွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လို ခုန်ကျော် ဖြတ်ခဲ့လိုက်သည်လည်း ကျွန်တော် မသိ.. သံတိုင်ဘေးက ရေနှုတ်မြောင်းကို ဘယ်လို ကူးခဲ့လေသလဲ ကျွန်တော် မသိ။ ကျွန်တော့် အာရုံသည် အ၀ါရောင်များဖြင့် ပြည့်နေခဲ့သည်။ ဖြတ်သွားသော ကားများဆီက အလင်းတန်းများ၏ အ၀ါရောင်များကလည်း သူတို့၏ တဝေါဝေါ အသံများကိုပါ အ၀ါရောင် စွန်းပေသွားစေသည်။ နေ့ခင်းဘက်က ခရမ်းပြာရောင် တောက်တောက် ရှိနေကြသော စက္ကူပန်းရုံများကလည်း နီယွန်မီးတွေဆီက အ၀ါရောင်တွေ ကူးစက်ကာ အ၀ါတွေ စွန်းကုန်ကြပြီ..။ ဟိုး ဝေးဝေး တမျှော်စာက လူနေတိုက်ခန်း မြင့်မြင့်မားမား တွေကလည်း မီးရောင်များကြောင့် အ၀ါရောင် ဖြစ်လို့ နေသည်..။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အ၀ါရောင် ဖုံးလို့ နေတော့ မြစ်ပြင်ထဲမှာ အရိပ်လာထင်သော ပုံရိပ်များကလည်း အ၀ါရောင်တွေ..။ ဒီတော့ မြစ်ရေပြင်လည်း အ၀ါရောင်များသာ လွှမ်းလို့ နေ၏။ တစ်ချက်တစ်ချက် ကြားရသော ပုရစ်အော်သံ၊ ၊ ဖားအော်သံတွေကအစ အ၀ါရောင်တွေ ဖြတ်ခနဲ လင်းပွင့်လာသလို ည၏ တိတ်ဆိတ်မှုကို ထိုးခွဲနေကြလေတော့သည်.။ အ၀ါရောင် မြင်ကွင်းထဲ ကျွန်တော် အဘယ်မျှ လွှင့်မျောသွားသည်လည်းမသိ..။ တောင့်တင်းလာသော ခြေသလုံးများကြောင့် အသိဝင်လာတော့ စက္ကူပန်းရုံနံဘေးမှာ ကျွန်တော်က မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်ရပ်တန့်လို့။ စက္ကူပန်းရုံကို ကျော်ဖြတ်ကာ မြစ်ဆိပ်နှင့် နီးနီးဆီ ဆင်းသွားရမလား။ အပူရောင်လို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ထားသော အ၀ါရောင်တွေက ခုချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို ညှို့ငင်ဖမ်းစားနိုင်နေတာတော့ အသေအချာ။ အ၀ါရောင်တွေ တလက်လက်ပြေးနေသော ရေပြင်မှာ လေလှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေ ကခုန်နေပုံက ကျွန်တော့်ကို သူတို့နှင့်အတူ လာကဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလား။ ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတို့ ရှေ့လှမ်းမယ် ပြင်ပြီးကာမှ ကျောရိုးတစ်လျှောက် စိမ့်ခနဲ ဖြစ်လို့သွားခဲ့သေးသည်။ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်သော..၊ ငြိမ်းချမ်းအေးမြဖွယ် အဆင်းရှိသော ထိုရွှေဝါရောင်သန်းသည့် မြင်ကွင်းနှင့် မြစ်ပြင်က ကျွန်တော့်လို လူတွေကို ဘယ်နှစ်ယောက်များ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလဲ.. ကျွန်တော် မသိနိုင်။ ကျွန်တော် ကျော်ဖြတ်ခဲ့သော သံတံတိုင်းနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းကို ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး တမင် ကာဆီးထားတာ မဟုတ်မှန်း သေချာလာသည်..။ သို့သော် ကျွန်တော်က တားဆီးထားသော စည်းတစ်ခုကို ဖြတ်သန်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ယစ်မူးဖွယ် အ၀ါရောင်ညကို ကျွန်တော့်အာရုံမှာ သုတ်လိမ်းမိခဲ့ပြီ။ နောက်တစ်ခေါက် ဒီနေရာ ထပ်လာလို့ ခုလို ပြည့်စုံလှပသော အ၀ါရောင်ညကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ရနိုင်ဖို့ သေချာ မျှော်လင့်ထားလို့ မရ..။ အ၀ါရောင် ညမြင်ကွင်းနှင့် အ၀ါရောင် လူးလွန့်လက်ဖြာနေသော လှိုင်းကြက်ခွပ်များ..။ နောက်ပြီး.... မြစ်ပြင်မှာ ၀ိုးတ၀ါးထင်နေသော တိမ်တိုက်များနှင့် ကောင်းကင်ကြီးသည်လည်း အ၀ါရောင် သန်းနေမလား။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့မကြည့်ရဲတော့။ သေချာသည်မှာ... ကောင်းကင်ကြီးပါ အ၀ါရောင်တွေ လွှမ်းနေခဲ့လျှင် ခန်းနားသော၊ ကြီးကျယ်သော ရွှေရောင်လွှမ်းသည့် ညချမ်းမှာ ကျွန်တော် သေးနုပ် ပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထူးဆန်းသည်ကတော့ အ၀ါရောင်ညသည် ကျွန်တော့်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် မြစ်တစ်စင်းအဖြစ် ရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်သည်..။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်ခင်းမှာ အရာရာဟာ ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်စီးဆင်းနေလိမ့်မည် ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် သတိမရနိုင်တော့..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အ၀ါရောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော ကျွန်တော်သည်..... အ၀ါရောင်ည.. အ၀ါရောင်လေပြည်.. အ၀ါရောင် လှိုင်းတွေကြား ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး စီးဆင်းပြစ်လိုက်လေတော့သည်။ ။
လေယာဉ်ကွင်းကို စထွက်လာကတည်းက ရင်ထဲမှာ အပျော်တွေနဲ့ ပြည့်သိပ် လှုပ်ခုန်လို့..။ အိပ်ယာက မထနိုင်၊ လိုက်မပို့နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း စိတ်ဆိုးချင်ယောင် မဆောင်အားသလို နှုတ်ဆက်စကားတွေ ချွေဖို့ရာလည်း သတိမရ။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လေဆိပ် လိုက်ပို့ပေးရလို့ ဘေးမှာ စူပုပ်ပွနေတဲ့ မျောက်မျက်နှာကိုလည်း ဂရုမပြုမိတော့ပါ။ MAI/ JETSTAR က ယနေ့ခရီးစဉ်မှာ ခရီးသည် အပြည့် စီးနင်းလိုက်ပါသောကြောင့် ခရီးဆောင်အိတ်များကို အဆင်မပြေပါက နောက်လေယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ပေးပါမည် ဆိုတာကြောင့်လဲ စိတ်အနှောက်အယှက် ကြာကြာ မဖြစ်လိုက်ပါ။ အိမ်.... အိမ်ကို မြန်မြန် ပြန်ရောက်ချင်ပြီလေ.....။ ဖေ နဲ့ မေရေ သား ပြန်လာပြီ လို့ စိတ်ထဲကနေ အကြိမ်ကြိမ် အော်ဟစ်ရင်း.......
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်တော့ အားလုံးက ချောချောမောမော... တစ်ခုပဲ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်ရသည်က အင်မီဂရေးရှင်းမှာ တန်းစီနေတုန်း လေဆိပ်က တာဝန်ကျသူ သမီးပျိုလေးတစ်ဦးက "Sir, this is only for Myanmar Passport Holder, Foreigners are over there" လို့ လာပြောတာ တစ်ခု ပါပဲ။ :-P
ဖေ နဲ့ မေကို ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ လေဆိပ်မှာ လာမကြိုဖို့ ပြောထားမိလေတော့ ရန်ကုန်မြေပေါ် ခြေချချချင်းမှာ ဖေနဲ့ မေ့ကို မတွေ့ရပါ။ ညီမလေး နှင့် ညီလေး... နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကို တွေ့ကတည်းက ကျွန်တော်က ပျော်နေနှင့်ပြီ။ အငှားကားပေါ်မှာ မောင်နှမတွေ ဗျောင်းဆန်အောင် သောင်းကျန်းကာ စကားတွေ ရေပက်မ၀င် ပြောနေကြလေတော့ ကားမောင်းသူပင် အပျော်တွေ ကူးစက်လို့...။
ကားရပ်ရပ်ချင်းမှာပဲ အိပ်ပေါက်ဝ ထိပ်မှာ စောင့်နေတဲ့ ဖေ့ကို တွေ့ရပါပြီ။ သိပ် ဒရမာ ဆန်တာပဲ မဝေဖန်ကြပါနဲ့။ ကားပေါ်က ပြေးဆင်းပြီး ဖေ့ကို ပြေးဖက်မွှေ့ရမ်း နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ဖေကပဲ ပိန်သေးသေးလေး ဖြစ်သွားတာလား၊ ကျနော်ကပဲ ဗလကြီးလာတာလား.. ဖေ့ကိုယ်ပေါ့ပေါ့လေးကို ချီမြှောက်ရင်း.... အရင်က ကျနော် ခိုစီးခဲ့ရတဲ့ ဖေ့လက်မောင်းကို ပြန်သတိရမိတော့.. ငယ်ဘ၀ကို လွမ်းသွားပြန်ပါတယ်။
ဖေက ငါလည်း သန်မာပါသေးတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြချင်လို့ထင်ရဲ့.... အထုပ်အပိုးတွေ ဇွတ်မ နေလို့ မနည်းတားရပါသေးတယ်။ သားတို့ ခိုစီးခဲ့တဲ့ လက်မောင်းတွေလေ လို့ အရင်လိုပဲ ရွှတ်နောက်နောက်နဲ့ ဖေပြောတော့ အလွမ်းတစ်ချို့ ပြေလျော့လို့သွားတယ်။
အိမ်ပေါ်မှာ စောင့်နေတဲ့ မေ့ဆီကို လှေကားတွေပေါ် ၀ရုန်းသုန်းကား ပြေးတက်ပစ်လိုက်ရင်း ပါးစပ်ကလဲ မေရေ.. သားပြန်လာပြီ လို့ တကျော်ကျော်အော်ရင်း.. အပေါက်ဝလဲရောက်ရော မေက ဒေါက်ခနဲ ခေါင်းခေါက်ပြီး ကြိုလေတော့တယ်။
ဟဲ့ မကြီးမငယ်နဲ့ အဲလောက်အော်လာရသလား၊ ဘေးအိမ်တွေ အားနာစရာ တဲ့လေ။
နဖူးအတော်နာသွားပေမဲ့ ချိုမြန်လှတယ်။ နဖူးကို ပွတ်ရင်း နာတာ မေရာ လို့ ပြောတော့ ထုံးစံအတိုင်း မေက ဘုကြည့်ကြည့်ရင်း ပိုကိုပိုတယ် လို့ ပြောပေမဲ့ မေ့မျက်လုံးတွေက ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရိပ်တွေက ကျွန်တော့်ကို အမောပြေ အလွမ်းဖြေပေးနေပါတယ်။
(ဒိုင်ယာရီက ဆက်ရန် ကျန်ပါသေးတယ်။ အပျင်းလဲမပြေ အပျော်ဖတ်လဲမဟုတ်တဲ့ စာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနေပါအုံးမယ်ခင်ဗျားးး)
မြန်မာပြက္ခဒိန် မှာ ဒီနေ့က
မန္တလေး နည်းပညာတက္ကသိုလ် အသင်းအဖွဲ့
Visit MIT Network မန္တလေး နည်းပညာတက္ကသိုလ် အသင်းအဖွဲ့
02. သားဦးစနေ ဒုက္ခပွေ
03. စနေသား၊ စနေဂြိုလ်နှင့် အလောင်းအစား
04. စနေသားနဲ့ သူ့အိမ်မက်များ
05. စနေသား ရဲဖမ်းခံရခြင်း
ESSAYS နှင့် ဘာသာပြန်များ
01. စီးကြောင်းထဲက ကျွန်တော်
02. “တစ်ဝက်တစ်ပျက် အိပ်မက်”
04. ချစ်သူများနေ့ ချစ်ပုံပြင်
07. သူတို့ ပိုင်တဲ့ မြန်မာ့အမွေ
01. ဖေဖေသို့ တမ်းချင်း
02. မေမေသို့ တမ်းချင်း
03. မူးယစ် ည
05. မိုး နဲ့ မြေ ကို ချစ်တဲ့သူ
01. ပန်းစကား ၁
02. ပန်းစကား ၂
03. ပန်းစကား ၃
အိပ်မက်၊ အတွေးစနှင့် ခံစားမှုများ
01. အတွေးစများ (၁)
02. အိပ်မက်တွေ (၁)
03. အတွေးစများ (၂)
01. Mogok (မိုးကုတ်)
02. Mogoke Gemstones
03. Mogoke and It's Gem stones
04. Some Places in Mogok
06. Myanmar's deadly ruby (From CNN)
07. Mogok Meeshay Noodles & Pickled Pork (မိုးကုတ်မြီးရှည် နှင့် ဝက်သားချဥ)်
08. Pictures of Mogok (မိုးကုတ်ဓာတ်ပုံများ)
10. Pictures of Mogok2(မိုးကုတ်ဓာတ်ပုံများ ၂)
11. Some Pagodas from Mogok (မိုးကုတ်က စေတီပုထိုး၊ ဘုရား တစ်ချို့)
12. “ဒို့ ဗမာကွ”
13. ဒေါ်နန်းကြည့်တောင်ပေါ်က ကျောက်သေတ္တာ
14. တိမ်တိုက်တစ်ခုရဲ့ မြို့ကလေး
၀တ္ထုတို နှင့် စာစုများ
01. စီးပွားရေး ကပ်
03. နှင်းခါးရိုက်တဲ့ ရင်ခွင်
04. သူနဲ့ မာဇရာတီ အပူ
05. “ ဟောဒီက ငှက်ပျောပေါင်း ”
ကဗျာ နှင့် ကဗျာ ခံစားမှု
03. မင်္ဂလာ နှစ်သစ် 2009
04. ခေါင်းစဉ်မသိ (၀၂)
06. ရင်ထဲရောက်နေတဲ့ ကဗျာလေးတွေ
09. April Lover
12. ဦးပုည ရဲ့ ကဗျာ တချို့
16. အညတြ (၁)
17. အညတြ (၂)
ဗဟုသုတ နှင့် ပုံပြင်များ
01. ဘ၀ကြင်ယာဘက် မိန်းမ လေးယောက်
02. The Cracked Pot (အက်ရာနဲ့ အိုးကလေး)
04. စာတစ်အုပ်ကို သူ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ အကဲမဖြတ်ပါနဲ့
05. WHAT IS A FAMILY? (မိသားစု ဆိုတာ)
06. Short Stories . 01
07. Love and Time (အချစ်နဲ့ အချိန်)
08. THE BOY AND THE APPLE TREE (ကောင်လေးနဲ့ ပန်းသီးပင်)
09. ဘဲငန်းတစ်ကောင်ရဲ့ စိတ်
10. မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းသလဲ
11. ဒုက္ခတွေကို အိမ် မသယ်နဲ့- ဒုက္ခသစ်ပင်
12. အပြောင်းအလဲ တစ်ခု
13. အရှုံးထဲက အမြတ်
14. မူးရင်မမောင်းနဲ့၊ မောင်းရင် မမူးနဲ့
15. ကော်ဖီခွက်ထဲ ယင်တစ်ကောင် ကျသွားတဲ့အခါ
16. စိန်ခေါ်မှုတွေ မရှိတဲ့ နေရာ
17. အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာ
Just for Laugh (ရီစရာ)
Subscribe Now: Cool
"Design is not making beauty, beauty emerges from selection, affinities, integration, love." Louis Kahn (1901-1974)
BLUEYou give your love and friendship unconditionally. You enjoy long, thoughtful conversations rich in philosophy and spirituality. You are very loyal and intuitive.Find out your color at QuizMeme.com!
ကျွန်တော့် အရောင်က အပြာရောင်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ အရောင်ကို စမ်း ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
Please download Myanmar Font from here.
မဟနသာ မရှိတော့ရင် မိခင်လောင်းများအတွက် စိတ်လေးစရာ...
မေတ္တာတရားက အရာရာကို အေးချမ်းစေတယ်။ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့သစ်တွေ အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ခရီးသွားဖော်တွေပေါ့။
ဝါသနာ တူတဲ့ ရောင်းရင်းတွေ
လောလောဆယ် ခေါင်းထဲ ရောက်နေတာက
ဘ၀ကို နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလို မသိလို့ရှိရင် အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါ ကြာလေအသုံးမကျလေ ဖြစ်လာတယ်။ ကြာလေ အဓိပ္ပါယ် မရှိလေ ဖြစ်လာတယ် ဆရာတော် ဦးဇောတိက သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ
ကဗျာအဖြစ် ရေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကဗျာ
မမ၀ါ ရဲ့ အမှတ်တရလေးများ
ဖခင် ဦးပြည်ကျော် ၏ (၆၀)နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ အလှူအဖြစ် မောင်ရဲမျိုးမောင်+မအိမ့်ဆုမွန် (စင်္ကာပူ) တို့၏ ကောင်းမှု အလှူ ၁၈.၅.၂၀၁၃
အိုင်အိုဝါ ရက်စွဲများ အပိုင်း (၃)
၂၀၁၂ ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
ကန္တာရမိုးစက်များ ထဲက မငုံ
Coral Reef (ဇွန်မိုးစက်)
UNICEF Ethical Guidelines
Yangon Trip 3
"လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ရသ" စာပေဟောပြောပွဲ
ကျနော်တို့မြန်မာပြည် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၁)
ကိုယ့် ဘာသာ အစာမကျေနေသူတယောက်ပါ
♪ ညီမလေး ဂျဲဂျယ် ♪
ဝေလေး ရဲ့ စိတ်ကူးကမ္ဘာလေး
စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ဥရှင်ဂျီး )
အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေတဲ့ တောင်ပေါ်သားလေး
ရွှေ ယွန်း ဝါ
ကောင်းကင်ကိုနမ်းသောမျက်ဝန်းတစုံ (သို့မဟုတ်) ဏီကင်း
မျှော်လင့်ချက် နဲ့ ရင်းနှီးခြင်း ……..
လေးမ ရဲ့ ကမ္ဘာ
သားဆက်ခြားနည်းများ (Birth Spacing Methods)
အင်ဒိုနီးရှား နိူင်ငံ မီဒန်းမြို့ တွင် တင်လှူမည့်စိန်ဖူးတော်ပင့်ဆောင်ပူဇော်ပွဲ
SoundFrost helps you search, play online and download music on your PC. [Giveaway]
ခင်ပွန်း၊ ဖခင်၊ အဘိုး၊ မိတ်ဆွေ ( ၁၁း၃)
Nanotetrapods Give LasersaBoost
# 2011 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ